eThekwini – Page 2 – The Ulwazi Programme
Akuselona leli kheli- Moses Mabhida Stadium
Kulolu chungechunge lwe-No Longer at This Address (Akuselona leli kheli), sigxila kumagama emigwaqo amasha eThekwini, nakubantu abaqanjwe ngabo ukuhlonipha. Futhi ngenkathi igama likaMoses Mabhida lingewona umgwaqo, inkundla yebhola lezinyawo iyingxenye enkulu ekubalazwe eThekwini (nobulona) esacabanga ukuthi kufanelekile ukubhala ngalo! UMoses Mbheki Mncane Mabhida wazalelwa KwaZulu-Natal, ngaphandle kwaseMgungundlovu, ngomhlaka 14 Okthoba 1923. Ubaba wakhe wayengumgqugquzeli, elibalulekile … Read more
Categories People, Places Tags Durban, eThekwini, eThekwini Municipality, Moses Mabhida, No Longer At This Address, Ukuqanjwa kabusha kwemigwaqo, ukushintshwa kwegama lomgwaqo
Akuselona leli kheli – kusuka ekubeni iDavenport Road kwaba iHelen Joseph Road
Ngomhlaka 9 Agasti 1956 izinkulungwane zabesifazane bazo zonke izinhlanga bamasha baya e-Union Buildings ePitoli. Inhloso yabo kwakuwukuhambisa uhlu lwezikhalazo kuNdunankulu wangaleso sikhathi, u J.G. Strijdom, ukuphikisana nemithetho yamapasi owawuthi abantu abamnyama base-Afrika ukuthi baphathe uhla lwamadokhumenti, okufaka phakathi isithombe, amarekhodi okuqashwa, ukukhokhwa kwentela kanye namarekhodi obugebengu, okwenza uhulumeni akwazi ukuqhubeka nokuvimba ukuhamba kwabantu abangebona abamhlophe. Bekungekho … Read more
Categories People Tags 1956 Women's March, Apartheid, Durban, eThekwini, eThekwini Municipality, Helen Joseph, No Longer At This Address, Ukuqanjwa kabusha kwemigwaqo, ukushintshwa kwegama lomgwaqo
Njengba kunezinguquko ezweni lonkana sicabanga ukuthi umqondo omuhle ukuthi sibhale ngomlando omncane waseNingizimu Afrika, wakamuva nowedlule. Akubonakali kungenzeka, kodwa cishe eminyakeni eyisikhombisa edlule lapho impi namagama emigwaqo yaseThekwini yaqala. Emizamweni yokwamukela omunye umlando waseNingizimu Afrika owawukhohlakala kaula ngesikhathi sobandlululo, amagama emigwaqo eThekwini amaningi aguqulwa ngo-2007. Izinguquko azizange zithathwe kahle, futhi kwalandela izimpi zenkantolo ezinde nezingxoxo … Read more